Global Voices teny Malagasy » Fitsidihana ny tontolon’ny bilaogy Saodiana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Novambra 2018 3:45 GMT 1	 · Mpanoratra Ahmed Al-Omran Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Miarahaba ny rehetra! Tongasoa eto amin'ny fitsidihana ny tontolon'ny bilaogy Saodiana voalohany. Ity zavatra kely mikasika izay zavatra noresahantsika ato. Ny tontolon'ny blaogy Saodiana dia manana bilaogy miisa 60 ao amin'ny Bilaogy Saodiana , anisan'izany ireo bilaogera izay monina ao anatiny sy ivelan'i Arabia Saodita, ankoatra ireo bilaogera avy any amin'ny firenen-kafa ary monina ao Arabia Saodita. Mihamitombo tsikelikely ny lisitra, saingy nihoatra ny volana vitsivitsy lasa izay, nisy ireo bilaogy vaovao niampy isan-kerinandro. Ny fiteny ampiasaina dia ny teny Anglisy sy Arabo.
Ny zava-misy hoe Mohammed Abdu no mpihira Saodiana malaza indrindra dia tsy midika inona amin'i Reema, izay manazava ny antony ankahalany azy . Mandritra izany, dia gaga i Riyadhawi  (Ar) mahita tranonkala antsoina hoe Saudi Caves (Lava-bato Saodiana) . “Gaga aho mahita momba ireo lava-bato lehibe manakaiky ny tanànanay ireo, saingy tsy nahalala na inona na inona momba azy ireo izahay”, hoy izy nanoratra.
Fouad Al-Farhan, izay tsy afaka nihaona tamin'i Karen Hughes, kosa faly tamin'ny fahitana fa ireo mpianatra ao amin'ny Kolejy Dar Al-Hekma ho an'ny Ankizivavy dia nilaza taminy izay tiany holazaina .
Miresaka momba izay antsoiny hoe “ady amin'ny maha-lahy sy vavy ” any Arabia Saodita i Farooha, ary mihevitra fa mihamitombo tsikelikely io tranga io. Nofeheziny hoe: “azo antoka fa tsy ady mahafinaritra izany”, saingy manontany raha misy olon-kafa nahavita mankafy izany araka izay ananany. Nankalaza ny Andron'ny Fandikan-teny ihany koa i Farooha, mpianatra mpandika teny.
Mashi Sah milaza amintsika ny fivoriany  (Ar) miaraka amin'i Pascal Ménoret, mpikaroka frantsay zay nianatra ny fiarahamonina Saodiana.
Tena faly be noho ny zanany voalohany  i Abu Yousef, zazavavy kely nomeny anarana hoe “Joori”, Nzighna kosa manana teny sy sary maromaro avy amin'ny fitsidihana miaraka amin'ny fianakaviany tany amin'ny toeram-piompiana lehibe iray.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/09/129143/
 Bilaogy Saodiana: http://saudiblogs.blogspot.com/
 ny antony ankahalany azy: http://rimyoleta.blogspot.com/2005/09/this-is-why-i-hate-mohammed-abdu.html
 dia gaga i Riyadhawi: http://riyadhawi.blogspot.com/2005/09/blog-post_25.html
 Saudi Caves (Lava-bato Saodiana): http://www.saudicaves.com/
 nilaza taminy : http://daralasr.com/blog/?p=196
 tiany holazaina: http://www.daralasr.com/blog/?p=193"
 ady amin'ny maha-lahy sy vavy: http://farahssowaleef.blogspot.com/2005/09/war-of-sexes-bils3oodi-na3am-alse3.html
 Nankalaza ny Andron'ny Fandikan-teny : http://farahssowaleef.blogspot.com/2005/09/happy-translation-day-mutarjmeen-and.html
 Tena faly be noho ny zanany voalohany: http://abu-yousef.blogspot.com/2005/09/hello-world.html
 manana teny sy sary maromaro : http://nzinghas.blogspot.com/2005/09/visit-to-farm.html